Oxymetholone (Anadrol) budada (434-07-1) hplc = 98% | Budada AASraw
Oxymetholone (Anadrol) budada
/ Products / Qaar kale waxay / Oxymetholone (Anadrol) budada
Rating: SKU: 434-07-1-1. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxay la socotaa awoodda wax-soo-saarka iyo wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka guud ee budada Oxymetholone (Anadrol) (434-07-1), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Oxymetholone (Anadrol) budada waxaa laga helaa isticmaalka ugu badan ee ka mid ah ciyaartoyda iyo kuwa wax dhisa jirka saameynaha badan ee ay bixiso oo kicinaysa testosterone supplements. Haysashada miisaanka, budada Anadrol waxaa loo maleynayay sida daroogada miisaanka. Marka laga soo tago kordhinta rabitaanka cuntada, waxay sidoo kale ka caawisay in la helo xoog iyo sidoo kale tirada unugyada dhiigga cas.
Fiidiyowga budada Oxymetholone (Anadrol).
Budada ceeriin Oxymetholone (Anadrol). Calaamadaha aasaasiga ah
Product Name: Oxymetholone (Anadrol) budada
Lambarka CAS: 434-07-1
Formula kelli: C21H32O3
Miisaankani waa: 332.5
Dhibcaha Biyaha: 178 ° C ilaa 180 ° C
Waa maxay Oxymetholone (Anadrol) budada?
Budada Oxymetholone, sidoo kale loo yaqaan Anadrol, waa synthetic, anabolic-androgenic steroids afka firfircoon (AAS) iyo 17a-methylated derivative of dihydrotestosterone (DHT) kaas oo loo isticmaalo daaweynta dhiig-yarida iyo tiro ka mid ah xaaladaha kale.
In bodybuilding, budada Anadrol waxaa loo arkaa steroid ugu awoodda badan ee suuqa. Budada Anadrol waxaa inta badan loo isticmaalaa by bodybuilders ee xilli-ka baxsan (marka bulking); si weyn u kordhinaya xajmiga murqaha iyo xoogga. Waxaa jira budada Anadrol waxaa lagu iibiyaa inta badan Anadrol budada manufacurer sida supplement bodybuilding ay sabab u tahay faa'iidooyinka badan ee alaabta.
Sidee budada Anadrol u shaqeysaa?
Marka la qaato, budada Anadrol waxay gashaa dhiigga waxayna ku wareegtaa jirka oo dhan. Marka ay ku jirto qulqulka dhiigga, waxay kicisaa sii-deynta xag-jiryo xor ah oo ogsajiin leh oo jirkaaga oo dhan ah. Xagjirayaashan xorta ah waxay u oggolaanayaan kordhinta dulqaadka inta lagu jiro jimicsiga, wakhtiga soo kabashada wanaagsan ee u dhexeeya jaangooyooyinka ama waxqabadyada, iyo hoos u dhaca wakhtiga soo kabashada ee u dhexeeya jimicsiga.
Budada Anadrol waxay sidoo kale u ogolaataa in badan oo ogsijiin ah in lagu qaado jidhka oo dhan, taas oo ah sababta ciyaartoyda qaarkood ay la kulmaan korodhka dulqaadka iyo sidoo kale koritaanka murqaha. Ma aha sida wax ku ool ah tan sida walaasheed steroid Dianabol, laakiin weli waxay leedahay faa'iidooyin kuwaas oo caawin kara dadka isticmaala dhammaan noocyada.
Budada Anadrol waa nooc wax laga beddelay oo testosterone ah oo leh hanti anabolic oo xooggan. Waxa loo isticmaalaa jidhku si uu u kordhiyo haynta nitrogen ee murqaha taas oo u horseedi karta mugga unugyada waaweyn iyo isku-darka borotiinka.
Iyadoo la kordhinayo qadarka borotiinka ee unugyada, budada Anadrol waxay bixisaa faa'iidooyin badan ciyaartoyda isticmaala sida:
Tirada muruqa oo korodhay Wakhtiga soo kabashada oo kordhay kadib jimicsi adag
Kordhinta xoogga iyo dulqaadka
Waxaa muhiim u ah qof kasta oo qaata budada Anadrol si ay u fahmaan in ay ka shaqeyso joojinta wax soo saarka testosterone dabiiciga ah ee jirka. Waxay qaadataa ugu yaraan 12 maalmood ka dib joojinta daawada ka hor inta aysan soo saarin testosterone dabiiciga ah mar kale bilaabmin.
Faa'iidooyinka budada Anadrol: maxaan ka heli karnaa budada oxymetholone?
Maanta, oxymetholone waxaa loo isticmaalaa in badan oo ka mid ah dhisidda jirka iyo culeyska marka loo eego daawada.
Budada Oxymetholone (Anadrol) waa steroid anabolic awood leh oo waxtar leh. Dabcan A of budada Anadrol ogolaan doonaa in aad hesho mass muruqa in waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah. Waxa lagu heli karaa kaniini iyo qaab budo ah, waana tan ugu waxtarka badan fasalkeeda. Saamaynta anabolic iyo androgenic ee xoogga leh waxay hubisaa guulaha la taaban karo ee xoogga iyo murqaha.
Saamaynta budada oxymetholone ayaa lagu muujiyaa codka la hagaajiyay iyo niyadda wanaagsan; alaabtu waxay saameyn togan ku leedahay waxqabadka tababarka iyo dulqaadka. Alaabtu waxay haysaa biyaha jidhka, taas oo ka caawisa in ay saliidayn kala-goysyada khuseeya waxayna saameyn togan ku leedahay xuduudaha xoogga. Intaa waxaa dheer, budada anadrol waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
Dardar gelinta gubashada dufanka;
Hagaajinta wax soo saarka unugyada dhiigga cas;
Waxay xoojisaa xoogga iyo dulqaadka;
Xoojinta iyo saliidaynta kala-goysyada;
Waxay dedejisaa korriinka murqaha.
Sida aad arki karto, budada Anadrol waxay leedahay faa'iidooyin badan oo u noqon kara jir-dhisayaasha ama ciyaartoyda. Haddii aad raadinayso in la kordhiyo tirada muruqa iyo xoogga, markaas budada Anadrol waa doorasho weyn kuu. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad marka hore hesho budada anadrol ee tayada sare leh. Soo saaraha ugu wanaagsan ee budada anadrol, waxaad noqon kartaa halkan.
Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca budada anadrol?
Guud ahaan, natiijooyinka wanaagsan ee lagala kulmay steroid, way ka sii xumaanaysaa waxyeelada. Inkasta oo budada Anadrol soo saartaa qaar ka mid ah xoogga ugu fiican iyo guulaha mass, sidoo kale waa steroid aad u adag.
Under isticmaalka la qoray ee qiyaasta ku habboon, weli waxaa jira khataraha waxyeelo ama falcelin xasaasiyad leh budada Anadrol. Dhibaatooyinka caadiga ah ee ragga iyo dumarka labadaba qaata oxymetholone waa shuban, hurdo la'aan, iyo neerfaha.
Dhibaatooyin kale oo halis ah ayaa laga yaabaa inay dhacaan, waana inaad isla markiiba wacdaa dhakhtarkaaga haddii aad la kulanto miisaan koror degdeg ah, neefsashada oo ku adag, ama barar xanuun leh, gaar ahaan anqawyada iyo cagaha.
Ragga, waxa ka mid ah:
Hoos u dhaca shaqada xiniinyaha iyo xiniinyaha oo yaraada
Koritaanka hypertrophy qanjirka 'prostate'
Kacsi xanuun badan ama daba dheeraada
Kaadi xanuun badan ama dhib badan
Dumarka, kuwaan waxaa ka mid ah:
Horumarinta sifooyinka ragga, oo ay ku jiraan timaha wajiga oo kordhay
Caado aan joogto ahayn
Bidaarta qaabka lab
Kintirka oo weynaada
Cod xabeeb ah ama qoto dheer
Waxa kale oo jira waxyeelooyin badan oo xun oo rag iyo dumarba laga yaabo inay la kulmaan, waxaana kuwan ka mid ah finan daran, burooyinka beerka, shaqada wadnaha oo hoos u dhacda, iyo xitaa beerka oo nolosha halis gelisa.
Sida loo isticmaalo budada Oxymetholone? Qiyaasta budada Anadrol
Wareegyada budada Anadrol waxay sida caadiga ah ka kooban yihiin Anadrol sida xarun kickstarting ah ee ugu horreeya 4 - 6 toddobaad halkaas oo ay kaabayaan xeryahooda kale ee saldhigga la isku duro oo loo isticmaalo ujeeddooyin la mid ah, sida Testosterone Enanthate, Deca-Durabolin (Nandrolone Decanoate), Trenbolone Enanthate iwm.
Wixii bilawga ah budada Anadrol 25 - 50mg maalintii. Isticmaalayaasha dhexdhexaadka ah waxaa loo yaqaanaa isticmaalka kala duwan ee 50 - 100mg maalintii, iyo in kasta oo ay ku soo wajahan yihiin xadka khatarta ah, isticmaalayaasha horumarsan ilaa 150mg maalintii.
Budada Anadrol waxay muujinaysaa nolol nus ah oo ku saabsan saacadaha 8 ilaa 9 ee jirka, sidaas darteed jadwalka ku lug leh qiyaasta subaxda (AM) oo ay ku xigto galabnimo / fiidkii (PM) qiyaasta ayaa ugu fiican.
Budada Anadrol Ma Badbaa?
Budada Anadrol waa steroid xoog leh oo afka laga qaato oo loo isticmaali karo in lagu caawiyo dhismaha murqaha iyo xoogga. Waa mid ka mid ah dhowrka steroids afka ee soo saara faa'iidooyin la yaab leh xagga cabbirka iyo xoogga iyada oo aan la kordhin baruurta jidhka. Waa dawo la isticmaalayey tobanaan sano si loo caawiyo dadka laga helo xaalado ay ka mid yihiin dhiig-yarida, lafo-jileeca, iyo noocyada kansarka qaarkood.
Anadrol weli FDA-ansixiyey ee Maraykanka ee daaweynta dhiig-yaraan. Sidaa darteed, marka lagu maamulo kormeerka dhakhtarka, Oxymetholone waxaa loo arkaa ammaan.
Si kastaba ha ahaatee, bodybuilders kuwaas oo qaata budada Anadrol waxay ku sii jiraan khatarta, maadaama loo maleynayo inay yihiin shakhsiyaad caafimaad qaba oo tan ku sameeya goob aan caafimaad ahayn. Tani waxay albaabka u furaysaa budada Anadrol in lagu xadgudbo, via qiyaaso sare iyo wareegyada xad-dhaaf ah.
Inkasta oo budada Anadrol ay FDA ogolaatay, haddana waa mid ka mid ah steroids-ka ugu adag ee loo isticmaalo bodybuilding, sidaas darteed taxadar aad u daran waa in la isticmaalo.
Wareegyada budada Anadrol
Wareegga saxda ah ee budada Anadrol waa 6-8 toddobaad. Tani waa qadarka wakhtiga ay qaadanayso saamaynta anabolic ee daawadu si ay u bilaabaan xidhashada.
Waa muhiim inaadan qaadan budada Anadrol muddo ka badan tan, maadaama ay dhaawac u geysan karto beerkaaga iyo xubnaha kale. Xusuusnow, waa inaad had iyo jeer qaadataa nasasho ugu yaraan 12 maalmood inta u dhaxaysa wareeg kasta si aad ugu oggolaato jidhkaaga inuu soo kabsado.
Si ka duwan qaar ka mid ah steroids kale, ma jiraan farqi weyn oo ku saabsan qiyaasaha guud ahaan dadka heerarka waayo-aragnimada.
Sababaha ugu muhiimsan ee tani waa in marka hore, budada Anadrol waa mid aad waxtar u leh qiyaasaha dhexdhexaadka ah waxaana loo yaqaanaa in ay hoos u dhigto waxtarka haddii aad aad u sarreeyso, halka waxyeellooyinku ay aad u kordhiyaan faa'iidooyinka.
Marka labaad, heerka sunta beerka sababa budada Anadrol had iyo jeer waxay noqon doontaa arrin xaddidan marka ay timaado qiyaasta. Kani maaha isteeroodh awood ama ay tahay (ama runtii u baahan tahay) in lagu qiyaaso heerar xad dhaaf ah.
Bilawga Anadrol Cycle
Bilawga A si fudud u bilaabi kartaa on qiyaasta 50mg ee budada Anadrol oo arag natiijooyin gaar ah si deg deg ah, laakiin haddii aad ka welwelsan tahay waxyeelo iyo tani waa markii ugu horeysay abid wareegga Anadrol, dose 25mg weli noqon doonaa mid aad waxtar u leh oo hoos u dhigi doonaa saamaynta xun ilaa aad. baro sida loo xakameeyo. Wareeg 4 toddobaad ah ayaa loo arkaa mid ku habboon bilawga.
Dhexdhexaadiyaha Anadrol Cycle
Isticmaalayaasha dhexdhexaadka ah ayaa wali si weyn uga faa'iideysan kara qiyaasta budada anadrol ee qiyaasta 50mg maalintii oo leh faa'iidooyin aad u degdeg ah oo xoog leh iyo tiro badan oo la arkay.
Kordhinta 100mg maalin kasta waa la tixgelin karaa haddii aad leedahay saameynaha soo raaca ee la xakameynayo iyo waqtigan waa inaad isticmaashaa midkood 0.5mg ama 1mg ee budada Arimidex maalin kasta inta lagu jiro wareegga si loo yareeyo waxyeellooyinkaas estrogenic.
Dhererka wareegga 6 toddobaad ayaa lagula talinayaa sida ugu badan si looga fogaado sunta beerka ee daran.
Heerka sare ee wareegga budada Anadrol
Isticmaale horumarsan ayaa sidoo kale loo isticmaali doonaa budada Anadrol si aad u ballaaran ama ujeedo goynta aadka u gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii loo isticmaalo dhammaadka hore ee wareeggaaga si aad u busbusho, 100mg maalin kasta toddobaadyada 4-6 waxay u badan tahay halka isticmaalayaasha ugu horumarsan ay bilaabi doonaan, oo ay weheliso 1mg ee Arimidex maalin kasta si loola dagaallamo waxyeellooyinka.
Iyadoo dad badan oo isticmaala horumarsan (iyo xataa qaar ka mid ah bilawga) ku faano isticmaalka Anadrol at 200mg ama ka badan maalin kasta si aad u hesho faa'iidooyin la taaban karo, tani waxay ku timaadaa khatar weyn oo labadaba waxyeellooyin degdeg ah iyo dhaawac beerka.
Budada Anadrol ma lagu dhejin karaa natiijooyin wanaagsan?
Budada Anadrol uma baahna in la is dulsaaran mana u baahan tahay in lagu ordo qiyaasta sare. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqadu waxay tahay in budada Anadrol lagu dhejin karaa noocyada kale ee steroids. Waxaa loo isticmaali karaa Winstrol si loo gooyo, ama Trenbolone haddii isticmaaluhu uu rabo inuu si dhakhso ah u helo murqaha. Marka dulsaar Anadrol, waxaa muhiim ah in aan la qaadan steroids dhiska aad u badan oo raqiis ah hal mar.
Sidoo kale, steroids dhiska afka waa in la qaataa marka la isku duro, iyo irbado waa in aan waligood is dulsaaran.
Waa kuwan qaar ka mid ah steroids oo lagu dhejin karo budada Anadrol:
Dianabol - Tani waa steroid aad loo jecel yahay in ay ku raso Anadrol. Waxay ka caawisaa si kor loogu qaado saamaynta Anadrol iyo siinayaa user tamar badan iyo mass muruqa.
Winstrol - steroidkan waxaa inta badan isticmaala ciyaartoyda si loo yareeyo dufanka jirka. Waxaa lagu dhejin karaa Anadrol si ay u caawiyaan dhisidda mass muruqa iyo kordhinta xoogga.
Trenbolone - Tani waa steroid aad u xoog badan oo lagu dhejin karo Anadrol si ay u caawiso isticmaalaha inuu helo mass muruqa iyo xoog si degdeg ah.
Turinabol - Tani waa steroid kale oo lagu dhejin karaa Anadrol si ay uga caawiso isticmaalaha inuu gaaro natiijooyin wanaagsan. Waxay ka caawisaa si loo hagaajiyo tirada muruqa, xoogga, iyo guud ahaan waxqabadka.
Anadrol budada PCT (Daawaynta Wareegga Kadib)
Waxaad hubaal ahaan u baahan doontaa inaad ka faa'iidaysato therapy wareegga post wax ku ool ah ka dib qaadashada budada Anadrol, sida heerarka testosterone noqon doonaa mid aad u cadaadisay; saameeya fayoobida maskaxda, heerarka tamarta, libido iyo guulaha.
Si loo soo kabsado wax soo saarka testosterone endogenous si deg deg ah, nidaamka PCT gardarada ah waa in la maamulaa. Tani waxay si gaar ah run u tahay haddii isticmaale uu ku dhejiyo budada Anadrol leh steroids kale oo anabolic ah.
Kuwa soo socda ayaa noqon doona qorshe tixraac:
hCG - 2000 IU ayaa la maamulaa maalin kasta oo kale muddo 20 maalmood ah
Tamoxifen (Nolvadex) - 2 x 20mg 45 maalmood
Clomiphene (Clomid) - 2 x 50mg 30 maalmood
PCT-gan waxa sameeyay Dr. Michael Scally, khabiirka beddelka hormoonka. Saddexdan dawooyin ah ayaa waxtar u leh daaweynta ragga 19 ee leh heerarka testosterone hooseeya (laga bilaabo isticmaalka steroids anabolic).
45 maalmood kadib isticmaalka PCT-gan, dhammaan heerarka testosterone ee ragga ayaa si buuxda ugu soo kabsaday heerarkii caadiga ahaa.
PCT A waa in la bilaabo sida ugu dhakhsaha badan budada Anadrol ayaa ka tagay jidhka user ee. Waxaan xisaabin karnaa tan iyadoo la adeegsanayo nolosha nuska ah ee Anadrol (8-9 saacadood). Si aad u shaqeyso marka dawadu ay si buuxda uga baxdo jirka, waxaad ku dhufatay nuska nolosha 5.5, na siinaya wadarta soo socota: 5.5 x 9 saacadood.
Sidaas darteed, PCT ah ee Anadrol waa in ay bilaabaan 49.5 saacadood ka dib markii qiyaasta la soo dhaafay. Haddii daroogooyinka kale lagu daro Anadrol, waxaad u baahan tahay inaad xisaabiso marka ay sidoo kale ka tagi doonaan jirka. Xaaladdan, ku bilow PCT-ga marka steroid-kii ugu dambeeyay uu ka baxo nidaamkaaga micnaha midka leh nolosha nuska ugu dheer.
Isticmaalka PCT-gan gardarrada ah, wax soo saarka testosterone endogenous wuxuu caadi ahaan ka soo kaban doonaa 2 bilood ka dib.
Halkee laga iibsan karaa Oxymetholone (Anadrol) budada?
Waxaa jira budo badan oo anadrol ah oo iib ah khadka. Budada Anadrol waxaa laga iibsan karaa online iyada oo loo marayo meelo kala duwan iyo portals. Waxaad ka iibsan kartaa tiro ku habboon. Iibsashada budada oxymetholone ee xaddi badan ayaa kaa caawin karta kharashyada guud. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad ka taxadarto runnimada iyo tayada alaabta. AASraw waa alaab-qeybiyaha budada anadrol ugu fiican.
FAQ ee budada anadrol:
Anadrol ma keeno haynta biyaha?
Haa, haynta biyaha waa saamayn dhinaca suurtogalka ah marka la isticmaalayo Anadrol. Ogaanshaha sida loo yareeyo saameynta xajinta biyaha iyadoo la adeegsanayo isticmaalka aromatase-ka-hortagga wanaagsan iyo ilaalinta cuntada ugu fiican, iyadoo sidoo kale fiiro gaar ah u leh sida kala duwanaanta qiyaastaada Anadrol ay saameynayso heerkaaga xajinta biyaha, waxaa suurtagal ah in la ilaaliyo saameyntan hoosteeda. xakameyn.
budada Anadrol loo isticmaali karaa jarida?
Isticmaalayaasha sare iyo kuwa khibrad sare leh waxay sameeyaan isticmaalka budada Anadrol ee ujeedooyinka goynta takhasuska leh: inta badan ka hor tartanka ama bandhigga.
Dadka qaarkiis waxay ku dhaaran doonaan in budada Anadrol ay tahay mid laga cabsado jarista steroid, laakiin haddii aad ogtahay waxaad samaynayso waxay noqon kartaa mid aad u awood badan ujeedadan.
Isticmaalka budada Anadrol inta lagu guda jiro jarista wareegyada Si aad u hesho xoogaa muruq intaad dufanka baabi'inayso waxay kuu horseedi kartaa jidh dildilaac ah - ilaa inta cuntadaada iyo jimicsigaaga si fiican loo fuliyo si aad natiijadan u hesho.
Waa maxay Dbol ama budada Anadrol ka xoog badan?
Labadan steroids ayaa caan ku ah awoodda ay u leeyihiin kor u qaadista xajmiga iyo xoogga labadaba. Iyo wax kale oo in wareegga Dianabol iyo wareegga Anadrol leeyihiin in ay wadaagaan waa in ay labaduba caadi ahaan afka laga qaato. Marka aad dooranayso inta u dhaxaysa labadan steroids, labaduba waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaare si ay u tixgeliyaan oo ay ku jiraan faa'iidooyinka iyo waxyeellooyinka.
Haddii ilaalinta heerarka sare ee testosterone ay tahay mudnaantaada, markaa Dbol waxay ku habboon tahay biilka sababtoo ah waxay kordhisaa testosterone bilaash ah, halka budada Anadrol aysan ahayn. Si kastaba ha ahaatee budada Anadrol ayaa si fudud loo dulsaaray steroids testosterone si ay uga caawiso diidmada arrintan. Waxaa jira budo badan oo anadrol ah oo lagu iibiyo khadka, xasuuso inaad iibsato budada anadrol oo leh alaab-qeybiye anadrol ah oo lagu kalsoonaan karo.
Marka la soo koobo, ma jirto mid ama mid kale oo ka fiican inta u dhaxaysa budada Anadrol iyo Dbol, iyo doorashadaada waxay hoos u dhigi doontaa yoolalkaaga shakhsi ahaaneed iyo dulqaadkaaga waxyeellooyinka steroid kasta.
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa Anadrol budo si aad u bilowdo shaqada?
Budada Anadrol bilaabay dhaqmo isla markiiba ka dib markii la soo galo jidhka, taas oo ah sababta waa in aad sugto ilaa hal bil ka hor inta aan la qiimeeyo in ay shaqaynayso iyo in kale. Haddii saddex bilood ka dib aysan jirin natiijooyin muuqda, isku day kaabis kale.
Anadrol budo keena korodhka miisaanka?
Haa, way dhici doontaa, laakiin tani waa sababta oo ah waxaad helaysaa muruq. Waa in aad qaadato kabka muddo gaaban oo keliya si aad si dhakhso ah u aragto natiijooyinka muuqda. Waqtigaas ka dib, u beddel badeecad kale oo leh faa'iidooyin la mid ah.
Ma karaan uwaa Anadrol budo all ydhegta rsoo baxay?
Tan laguma talinayo sida budada Anadrol waa mid ka mid ah steroids-ka adag ee aad qaadan karto. Tani waxay hubaal ahaan u keeni doontaa dhaawac xad dhaaf ah oo wadnaha ah, hoos u dhigi doona wax soo saarka testosterone endogenous si weyn oo cadaadis cajiib ah beerka.
Sidoo kale, ma jirto faa'iido badan oo lagu sameeyo tan, maadaama faa'iidooyinku ay sii jiri doonaan, sababtoo ah jidhkaaga oo la qabsanaya steroid-ka. Ma rabtid in aad shuruudo jirkaaga u baahan tahay qiyaasta mega ee Anadrol si ay u sameeyaan faa'iidooyin dheeraad ah, taas oo noqon doonta kiiska haddii qof doortay in uu qarax iyo safar Anadrol.
Sida loo khadda haddii miyo Anadrol budo is reel?
Waxaad si fudud uga dalban kartaa muunad imtixaan online. Tijaabooyin kala duwan, waxaad ku ogaan kartaa walaxda iyo nadiifnimada. Tani waxay kuu sheegi doontaa haddii ay tahay budada Anadrol dhabta ah iyo inta mg ee dhab ahaantii ku jira kiniinka.
Tijaabooyinku inta badan waa kuwo raqiis ah oo runtii mudan in la sameeyo.
Miyaan tAke anadrol budada pdib-workout?
Tani waa istaraatiijiyad wax ku ool ah oo loogu talagalay tamarta aadka u weyn, xoogga, matoorada iyo dhiirigelinta jimicsiga.
Si kastaba ha ahaatee, budada Anadrol waa in loo qaybiyaa qiyaaso badan maalintii oo dhan si ay u dhawraan uruurinta ugu badan ee xarunta ee dhiiggaaga. Markaa, kaliya 1/3 ama 1/2 ee qiyaastaada maalinlaha ah waa in la qaataa ka hor jimicsiga.
Ma Anadrol budo sababa timaha daataan?
Mid ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca waa bidaarta xad dhaafka ah. Steroids anabolic, oo ay ku jiraan Anadrol, waxay keenaan timo lumis ragga, iyo, nasiib daro, habkani ma aha mid dib loo celin karo.
Can Anadrol budo weyn kaa dhigi?
Sida laga soo xigtay dadka isticmaala, Anadrol hagaajin karaa habka of protein-synthesizing. Tani waxay keeni kartaa horumarinta murqaha waaweyn iyo kuwa waaweyn. Waxay kaloo sheegeen inay kor u qaadi karto korodhka miisaanka iyo koritaanka murqaha ee jidhkaaga. Isticmaalka bilawga ah ee alaabta waxay keeni kartaa kor u kac weyn oo ah xajmiga murqahaaga
Waa maxay wakhtiga maalinta waa in aan qaato Anadrolbudo?
Waqtiga ugu fiican waa ka hor wakhtiga jiifka. Jirka jirku inta lagu jiro hurdada ma helo kalooriyo oo waa cuncun, waa kaliya isticmaalka.
 Synthesis of a metabolite oxymetholone muddada-dheer.Kratena N, Biedermann N, Stojanovic B, Göschl L, Weil M, Enev VS, Gmeiner G, Gärtner P. Steroids. 2019 Oct;150:108430. doi: 10.1016/j.steroids.2019.108430. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31229510.Barnaamijka Cilmiga Sunta Qaranka.Rep Kansarka. 2011;12:338-40.PMID: 21860526
 [Waayo-aragnimada isticmaalka hoormoonka anabolic (Anadrol) ee cudurka kaadi-macaanka]. AMAHA E, HAGAI A, TAKAGI S, NAKANO T. Rinsho Ganka. 1962 Oct;16:1069-74. PMID: 14012448
 Dib u eegista oxymetholone: ​​17alpha-alkylated anabolic-androgenic steroid. Pavlatos AM, Fultz O, Monberg MJ, Vootkur A, Pharmd. Clin Ther. 2001 Jun;23(6):789-801; dood 771. doi: 10.1016 / s0149-2918 (01) 80070-9. PMID: 11440282
 Qiimaynta eexda iyo niyadda ee dadka isticmaala iyo kuwa aan isticmaalin steroids anabolic-androgenic. Bond AJ, Choi PY, Pope HG Jr. Khamriga Maandooriyaha 1995 Mar;37(3):241-5. doi: 10.1016/0376-8716(94)01071-r. PMID: 7796718
 Saamaynta steroid anabolic afka ee xoogga muruqa iyo korriinka muruqa ee bukaanka hemodialysis. Supasyndh O, Satirapoj B, Aramwit P, Viroonudomphol D, Chaiprasert A, Thanachatwej V, Vanichakarn S, Kopple JD. Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Feb;8 (2):271-9. doi: 10.2215/CJN.00380112. Epub 2012 Nov 2. PMID: 23124786
 NTP Toxicology iyo Carcinogenesis Studies of Oxymetholone (CAS NO. 434-07-1) ee F344 / N Jiirka iyo Daraasadaha Sunta ee Oxymetholone ee B6C3F1 Jiirarka (Gavage Studies). Barnaamijka Sunta Qaranka. Barnaamijka Natl Toxicol Tech Rep Ser. 1999 Agoosto;485:1-233. PMID: 12571678
 Sunta ay keento steroid-ka anabolic-androgenic ee dhaqamada unugga myocardial-ka ee jiirka ilmaha dhasha. Welder AA, Robertson JW, Fugate RD, Melchert RB. Toxicol Appl Pharmacol. 1995 Agoosto; 133 (2): 328-42. doi: 10.1006/taap.1995.1158. PMID: 7645030
Qalabka Trestolone Acetate (MENT)
Budada Eplerenone (107724-20-9)
Daawooyinka Masteron Propionate (Drostanolone)
Dehydroepiandrosterone/DHEA budada (53-43-0)
Isticmaal lab ah (2)
Galmada Horumarinta Deedaha (8)
Qaar kale waxay (66)
Daawooyinka PCT ee soo kabashada –Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin
Qirashada Jacaylka ee Phosphatidylserine(PS) Budada Dadka